Dagaal ka dhacay magaalada Baladweyne iyo General Xuud oo hanjabad u diray Hirshabelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal ka dhacay magaalada Baladweyne iyo General Xuud oo hanjabad u diray Hirshabelle
Tuuryare 4 July 2021 4 July 2021
Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in uu dagaal u dhexeeya ciidamada dowlada iyo maleeshiyo taabacsan General Xuud uu ka bilowday xaafado ka mid ah magaalada Beledweyne.
Dagaalkan ayaa ka dhacay xaafadaha Nuur Xawaad iyo Dhagax Jebis kadib markii ay gudaha u soo galeen maleeshiyaadka taabacsan General Abuukar Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabelle.
Lama oga illaa hadda khasaaraha ka dhashay iska horimaadka balse xaalada ayaa degen haatan.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan inuu salka u hayo diidmo ay diidan yihiin kooxda uu hoggaamiyo General Abuukar Xuud kulan maanta la qorsheeyay inay golaha wasiirada Hirshabelle ku yeesheen magaalada Beledweyne.
General Xuud ayaa sheegay in xal aan xabad aheyn uusan u heynin maamulka Hirshabelle islamarkaana uu xiri doono garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne.
Shalay ayaa waxaa gaaray magaalada Beledweyne qaar kamid ah golaha wasiirada Hirshabelle oo ka tegey magaalada Muqdisho,iyadoo halkaa uu hore ugu sugnaa Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Yuusuf Hagar Dabageed.
Guddiyada Doorashooyinka oo loo soo xirey tababar u socday muddo 3 cisho ah
Dagaal u dhaxeeya Al shabaab iyo ciidanka dowladda oo ka dhacay Baladweyne